मौद्रिक नीति सार्वजनिक, कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थामा थप कडाइ – News Nepal
१७ जुलाई २०२०, १७:०८ +०५४५
४ घण्टा पहिले मा अद्यावधिक
आर्थिक आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न जोड दिँदै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ।
अरू उल्लेख्य कुरा के हुन्?
कोभिड-१९ महामारीका कारण अतिप्रभावित हवाई उड्डयन व्यवसाय, यातायात, होटल, रेस्टुराँलगायतका पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि चालु पुँजी कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनः कर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता दिइने बताइएको छ।
मौद्रिक नीतिमा कोभिड-१९ प्रकोपलाई दृष्टिगत गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ। उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगार सिर्जना र उद्यमशीलता विकासका लागि तोकिएका क्षेत्रका कर्जा ऋणीलाई पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध हुने उल्लेख छ।
के छ प्रतिक्रिया?
मौद्रिक नीतिले हाम्रा अधिकांश माग सम्बोधन गरेको छ । पुनरकर्जा लगायत प्रावधानले साना तथा मझौला उद्यमी, पर्यटन क्षेत्रले राहत पाउनेछ । ऋणको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकिकरण सुविधाले व्यवसायीलाई सहयोग पुग्नेछ। कृषि जलविद्युतमा लगानी बढ़ने देखिन्छ । प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपेक्षा ।
— Shekhar Golchha (@golchha_shekhar) July 17, 2020
महासङ्घका भूतपूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले नीतिले केही हदसम्म व्यवसायीको समस्यालाई सम्बोधन गरेको भन्दै ट्वीट गरेका छन्।
व्यवसायी सौरभ ज्योतिले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति प्रगतिशील रहेको र यसमा निजी क्षेत्रलाई केही राहत दिँदै दीर्घकालीन योजना समावेश गरिएको भनेका छन्।